निःशुल्क अमेरिकी नागरिकता परीक्षण क्लास | USAHello
आफ्नो नयाँ देशमा एक नागरिक बन्ने ठूलो कदम हो. एक नागरिक, तपाईं राष्ट्रिय चुनावमा मतदान र आफ्नो समुदायमा योगदान गर्न सक्छन्. प्राकृतिक जो मानिस, वा नागरिक बन्न, राम्रो रोजगारीका अवसरहरू पनि छन्.
USAHello मा, हामी विश्वास शरणार्थी र आप्रवासी हाम्रो समाज अनमोल सदस्य हुन्. हामी नागरिकता आफ्नो बाटो मा तपाईंलाई मदत गर्न गर्व.
युएसएहेल्लो कक्षा कोठाको बारेमा अधिक जानकारी फेला पार्नुहोस्
कसरी लागू गर्ने र नागरिकताको तयारीका लागि फेला पार्नुहोस्
यो अमेरिकी नागरिकता परीक्षण लागि तयार अनलाइन वर्ग छ. तपाईं यो कक्षा तपाईको फोन वा कम्प्युटरमा लिन सक्नुहुन्छ.
कक्षा आत्म-paced छ, त्यसैले तपाईं कुनै पनि समयमा सिक्न सक्छौं. कक्षा अनुवाद गरिएको छ त्यसैले तपाईं आफ्नै भाषामा वा अंग्रेजीमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ. नोट: तपाईले आफ्नो नागरिकता परीक्षा अंग्रेजीमा लिनु पर्छ.
आज सुरु गर्नुहोस्! हाम्रो कक्षाहरू तपाईं परीक्षण को लागि तयार हुनेछ, तर केवल अमेरिकी सरकार तपाईं नागरिकता दिन सक्छ.
कुनै पनि वेबसाइटमा तपाईं बताउँछ भने तिनीहरूले तपाईंलाई अमेरिकी नागरिकता दिन सक्छ, यो सत्य होइन. तिनीहरूलाई पैसा वा व्यक्तिगत जानकारी दिन छैन.
कम्प्युटर वा आफ्नो फोनमा यो पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेपछि, तपाईं नागरिक परीक्षा पास गर्न तयार हुनेछ, समीकरण लागि आवश्यकताहरु को एक. तपाईं पनि राम्रोसँग संलग्न विभिन्न चरणहरू बुझ्नुहुनेछ प्राकृतिकीकरण प्रक्रिया.
युएसएहेल्लो नागरिकता तयारी वर्गमा तपाईंलाई स्वागत छ!
नागरिकता प्रक्रिया 1
यो "नयाँ सांसार"
कसरी अमेरिकी नागरिक बन्ने भन्ने बारे फेला पार्नुहोस्
यदि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ र नागरिकताको लागि कसरी आवेदन दिने भनेर फेला पार्नुहोस्. N400 फाराम भर्न मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्. अन्तर्वार्ताको बारेमा सबै जान्नुहोस्.
अमेरिकी नागरिक बन्न तयार हुनुहोस्